Iindaba-Ubunjineli obukhulu bokuxuba isityalo kuphuhliso oluhlaza okrelekrele kwicala elitsha lokuxuba umzi mveliso wezityalo ukuthengisa ngokuthe ngqo
Ubunjineli bezityalo ezikhulu zokukhulisa ukukhula okrelekrele kwesikhokelo esitsha sokuxuba isityalo sefektri ukuthengisa ngokuthe ngqo
Isalathiso esitsha sophuhliso olukrelekrele noluluhlaza lobunjineli obukhulu bezinto zokuxuba izixhobo. Ukujongana notshintsho olukhawulezileyo kwimeko yangoku, ubunjineli bemveliso enkulu yokuxuba nayo ijongene nohlaziyo oluhambelanayo. Kule mihla, ngokukhawulezisa kolwakhiwo lwasezidolophini nolwasemaphandleni, ibango loomatshini bekhonkrithi nalo lenyukile. Nangona kunjalo, kukho izixhobo zekhonkrithi ezingapheliyo kwimarike, kwaye umgangatho wazo awulingani nangakumbi. Phakathi kwezi mveliso, sele kukho ezinye iimveliso ezinenqanaba elithile lokuzenzekelayo, ukuchaneka okuphezulu kobunzima, umgangatho wesitishi sokuxuba, kunye notyalo-mali olusezantsi. Kodwa kwangaxeshanye, kukwakho nabanye abavelisi abatsala abathengi ngamaxabiso asezantsi, kwaye iiparameter zobuchwephesha zezixhobo ziye zahlala kwinqanaba lemveli.
Okokuqala, malunga nokuchaneka kwezixhobo. Ukuchaneka kwezixhobo ezikhulu zokuxuba izityalo kubonakala ikakhulu kwimiba emine yokudityaniswa, isamente, ukudityaniswa kunye namanzi. Ukuqokelela, ukuchaneka kulawulwa ngokubanzi malunga ne-2%, isamente imalunga ne-1%, ii-admixtures ngokubanzi zimalunga ne-1%, kwaye ukuchaneka kumalunga ne-1%. Kwizinto ezihlanganisiweyo, ii-hoppers ezinobunzima kunye nezikali zebhanti zihlala zisetyenziselwa ubunzima. Izikali zebelt zihlala zinobunzima obongezelekayo, kwaye ii-hopper ezinobunzima zahlulwe zangumlinganiso kunye nobunzima bomntu ngamnye. Ubunzima besamente kunye neminye imigubo ikwahlulwe ngeendlela ezimbini: umntu ngamnye kunye nobunzima obongezelekayo. Izongezo zahlulwe zaziindlela ezintathu zokulinganisa: i-volumetric, ubunzima, kunye ne-pulse ngokwezongezo ezahlukeneyo. Ngamanzi, ukwahlulwe ngeendlela zeemitha ezi-2, ezizezi umthamo kunye nobunzima. Ukuqinisekisa ukuchaneka kwezinto ezingafunekiyo sisitshixo sokuvelisa ikhonkrithi esemgangathweni yorhwebo. Ukuba ukuchaneka kwesixhobo kuphuculwe, izixhobo ngokungathandabuzekiyo ziya kuba namandla ngakumbi.
Okwesibini, kwizityalo ezinkulu ezixubekayo, eyona njongo iphambili kukuvelisa ikhonkrithi esemgangathweni yorhwebo. Ke ngoko, ukukhethwa kwezinto eziluhlaza kubaluleke kakhulu. Ngeemfuno eziya zisomelela kwizixhobo eziluhlaza, ukukhethwa kwezixhobo zokwenza imveliso kuye kwachaphazeleka. Ngokubhekisele kwizongezo ezichaphazelekayo, intsalela yenkunkuma eqinileyo yomzi mveliso efana ne-fly ash, i-slag, i-slag yamanzi, kunye ne-calcium carbide slag kufuneka isetyenziselwe ukubuyisela endaweni yokuqhubekeka nokusetyenziswa kwezixhobo zemveli ezikrwada zomgubo. Okwesibini, ngokwee-aggregates, amashishini ahambelana nawo anokuphinda asetyenziswe ekusebenziseni ngokupheleleyo izixhobo kwaye afezekise injongo yolondolozo lwezixhobo.
Ngaphaya koko, ulawulo lwezixhobo zemizi-mveliso emikhulu yokuxuba kufuneka luphuculwe ngakumbi ukufezekisa ubukrelekrele obupheleleyo kwaye ngaloo ndlela kukhululwe abasebenzi. Ngophuhliso lwamaxesha, izixhobo ezizenzekelayo ngokupheleleyo azinakuphepheka. Ukuba ufuna ukugcina indawo kumzi mveliso wekhonkrithi, ubuntu kunye nenkqubo yolawulo zibalulekile.
Ixesha Post: Oct-28-2020
Inkqubo yokuBalwa kweDatha yokuBala, Inkqubo yokuDibanisa, Ngokuzenzekelayo ukudibanisa isichumisi Umxhubi, Ikhonkrithi Umxhubi Yiba nenceba, Zenzekelayo Umdibaniso Batching Machine, Inkqubo yokuBamba ngokuZenzekelayo,